Mkpụrụ Semalt Na-enye Ihe Mmasị Na-enyere Aka Na Top 5 Web Scrapers
Ọtụtụ mgbe, ozi anyị chọrọ ga-abanye na saịtị, ma anyị enweghị ike ihichapu ma ọ bụ gbapụ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ezie na saịtị ụfọdụ na-agbasi mbọ iji gosipụta data na usoro dị ọcha na nke a haziri ahazi, ndị ọzọ enweghị ike ịnye ihe ntanetị ọ bụla ma ọ bụ ebe ntinye data. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji dị mkpa ịnweta ndị na - ahụ maka ebe ndị kachasị mma weebụ, ndị na - egwupụta egwu, na ndị na - agụ akwụkwọ - curso fotografia arquitectura. N'ebe a, anyị atụlewo ihe ise dị n'akụkụ a.
Webhose.io na-enyere anyị aka ịnweta data sitere na ntanetị na saịtị. Nke kachasị mma bụ na mmemme a na-egwupụta saịtị ma na-eme ka saịtị dị mfe ma na-enye data na usoro dị ọcha na nke a haziri nke ọma. Ọ na-enyekwa anyị ohere ichopu data dabere na okwu ha, mkpụrụokwu, asụsụ, na ọdịdị ha. Enwere ike nweta nsonaazụ ikpeazụ n'ụdị nke XML, RSS na JSON faịlụ. Ọ bụ ezie na mmemme a enweghị ego, ịnwere ike ịnweta mbipụta ya kachasị elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji Webhose.io maka nzube azụmahịa. Atụmatụ a kwụrụ ụgwọ ga-enyere gị aka iziga ọtụtụ arịrịọ HTTP na ihe nkesa ahụ, na-eme ka ọ dịrị gị mfe iwepụ ma nwuo ebe ndị ahụ.
Usoro ọgwụ bụ ihe dị ike ma dị ịtụnanya na ntanetị na ịntanetị. Akụkụ kachasị mma bụ na usoro a na-akwado ndị ọkachamara, ndị ị nwere ike ịbanye maka ndụmọdụ bara uru na Ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na Koodu, ọ ga - enyere gị aka ịchọta ma dọọ data gị ma zọpụta ya na ọkwa dị iche iche dị ka CSV na JSON.
Hub ga-enye gị ihe ngosi bara uru bara uru, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịkwanye na m data ahụ. A na-ebudata ya na saịtị ndị ọrụ, a pụkwara ibudata nsonaazụ free na ụlọ ahịa ọ bụla.
5. Nchịkọta Web maka Chrome:
Ọ bụrụ na ị nwere Google Chrome dị ka ihe nchọgharị weebụ gị, ị ga-ahọrọ maka Wepụ Web. Ọ bụ ihe na-emepụta nsị na ntinye egwu nke na-enye gị ohere ịmepụta sitemaps maka gị onwe gị blọọgụ na weebụsaịtị weebụsaịtị. Naanị ị ga-ebudata, wụnye ma gbakwunye ihe nhicha a na ihe nchọgharị Chrome gị wee hụ otú ọ ga-esi wepu data site na weebụsaịtị gị. Ị nwekwara ike mbubata saịtị ma ọ bụ jiri ndebiri ya iji mee ka nyochaa na arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ ga-echekwa data gịpụtara na faịlụ CSV ma ọ bụ na ya nchekwa nchekwa Archive.